श्रावण १३ गते, २०७३ बिहिवार
28th July, 2016 Thu १३:४७:२४ मा प्रकाशित
पछिल्लो समय विभिन्न माओवादी घटकहरुबीच एकता भएपछि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ एक्लो भएको भन्दै उनलाई एकताविरोधी नेता भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । तर वैद्य भने आफूलाई एक्लो भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीति अवस्थाको बारेमा खुलेर कुराकानी गरेका वैद्यले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको प्रश्न झनै गम्भीर बनेको बताए । नयाँ संविधान जारी हुनुअघि सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको वैद्यले संविधान पुनर्लेखन पनि अस्वीकार गरे । एक्लै हिडेका वैद्यले क्रान्ति गर्न नसक्ने आरोप लागिरहेका वैद्यको धापासीस्थित निवासमा पुग्दा क्रान्तिप्रति झनै उत्साहित भएर कुरा गरे । वैद्यले अबको क्रान्ति हिजोको जस्तै तरिकाले नहुने भन्दै अबको युद्ध युद्ध साइबर युद्ध हुने बताए । विश्वमा प्रविधिका विकासले फाइदा नै भएको उल्लेख गर्दै क्रान्तिकारीहरु पनि न्यूक्लीयर र आधुनिक हतियारहरुबाट लड्न सक्ने दाबी गरे । उनले साम्राज्यवादीहरुको भूमण्डलीकरणबाट मात्र नभइ सर्वहारावर्गको पनि भूमण्डलीकरणमा जोड दिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्न लागिरहेको बेला मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’सँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी । माओवादी केन्द्र र एमालेको गठबन्धन टुटेर अहिले कांग्रेस माओवादीबीचको नयाँ गठबन्धनमा सरकार बन्दैछ । तर राष्ट्रवादी सरकार हटाएर कतैको निर्देशनमा नयाँ गठबन्धन बनेको आरोप लगाइँदैछ । यी राजनीतिक घटनाक्रमलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ? पहिलो कुरा त यो संसदीय ब्यबस्थाभित्र सरकार बनाउने ढाल्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ । सरकारमा रहेकाहरुले पनि त्यो खालको तजबिजहरु गर्छन् । अहिले एउटा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने पक्ष र अविश्वासको प्रस्ताव भोग्नेवाला दुवै राष्ट्रबादी होइनन् जस्तो लाग्छ मलाइ । तर पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पारबहन लगायतका सम्झौता गरेको काम चाँही जायज नै मान्न सकिन्छ । बाहिर उनी राष्ट्रवादी हुन् भन्ने त चर्चा चलि नै रहेको छ तर चर्चा चलाइएजस्तो त्यति धेरै राष्ट्रबादी भने चाँही होइनन् । तै पनि उनले केही राम्रो काम चाँही गरेका हुन । यतापट्टि एमाओबादी नेतृत्वले खेलिरहेको भूमिकाले स्थिति अझ जटिल हुने हो कि भन्ने लाग्छ । किनभने यो चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ, बाहिरका अखबारहरुमा पनि यस्ता कुराहरु आइरहेका छन् । बाहिरका अखबारहरुले अहिलेका प्रधानमन्त्री बेठीक थिए, अब आउने प्रधानमन्त्री ठीक छन् भनेर पक्ष लिएजस्तो देखिन्छ । यो स्थिति हेर्दा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको प्रश्न अझै गम्भीर बन्ने हो की भन्ने अवस्था छ । तपाईँहरुले बारम्बार भन्ने गरेको राष्ट्रियताको खतरा ओली सरकारको बर्हिगमनपछि झनै बढेको हो त ? राष्ट्रियताको खतरा त धेरै गम्भीर छ । यो विषयलाई त अझ बढी उठाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रियताको विषयमा त अझै बढी खतरा छ । लोकतन्त्रको त के कुरा भयो र ? लोकतन्त्र त भन्दिए भैहाल्यो । लोकतन्त्र अर्थतन्त्रमा पनि अभिब्यक्त हुनुपर्दैन । यो पोलिटिक्समा पनि अभिब्यक्त हुनुपर्दैन । संसदमा बस्या’छ, खा’छ, भाषण गर्या’छ, त्यो लोकतन्त्र भन्छन् । आर्थिक क्षेत्रमा, साँच्चिकै हक अधिकारको क्षेत्रमा आयो भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन । राष्ट्रियताको कुरा त अब देखिने गरी नै थप पैदा हुने स्थिति भयो भन्ने लाग्छ । हाम्रो के हुन्छ भने, राष्ट्रिय स्वाधिनताको निम्ति संघर्षको तयारी गरेर नै जाने हुन्छ ।
देशलाई राष्ट्रियता र जनतन्त्रको गम्भीर रोग लागेको छ । राष्ट्रियताको पनि समस्या छ, जनतन्त्रको पनि समस्या छ । दुईतिर क्यान्सर लागेकाले एकातिर मात्रै अपरेशन गर्छु भनेर हुँदैन ।
राष्ट्रियताको खतरा त त्यो अवस्थामा हुन्छ कि जब अहिलेको संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर पो भन्छन् ? त्यो कुरा बिल्कुल गलत हो । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनतन्त्र सबै एक ठाउँमा जोडिएका हुन्छन् । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविका एकदमै को–रिलेटेड एकअर्कासँग सम्बन्धित भएर गइराखेको छ । त्यसकारणले राष्ट्रियताबिनाको लोकतन्त्र साम्राज्यवादी विस्तारबादी लोकतन्त्र हो । त्यो तरिका त देखियो नि त । राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको समस्या एकैचोटी हल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । एमाओवादीका साथीहरुसँग हाम्रो त्यहिँनिर पर्या हो । पहिले बाबुरामजीले लोकतन्त्रको हल गर्नुपर्यो भनेर त्यस्तै गर्नुभयो । एकपटक लोकतन्त्रको हल गर्ने अर्को पटक राष्ट्रियताको भन्ने नै हुँदैन । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनतन्त्रको हल एकैपटक गरिनुपर्छ । देशलाई राष्ट्रियता र जनतन्त्रको गम्भीर रोग लागेको छ । राष्ट्रियताको पनि समस्या छ, जनतन्त्रको पनि समस्या छ । दुईतिर क्यान्सर लागेकाले एकातिर मात्रै अपरेशन गर्छु भनेर हुँदैन । जनताको जनतन्त्रमा पनि क्यान्सर लगाइदिएका छन् । दुवैको एकैपटक निदान गर्नुपर्छ । क्यान्सर जनतामा होइन, शासक वर्गमा लागेको छ । अवसरवादीहरुमा क्यान्सर लागेको छ । त्यो क्यान्सर निको पार्ने उपाय तपाईँहरुसँग के छ त ? क्यान्सर निको पार्ने भनेको त संघर्षको तयारीबाट नै हो । जनताकोबीचमा जाने र संघर्षको तयारी गर्नुपर्छ । संघर्षकाबीचबाट क्यान्सर हट्छ । यी समस्याहरु समाधान गर्न संघर्षबिनाको बिकल्प छैन । संघर्षबाट नै त्यो क्यान्सरलाई फाल्नुपर्छ । अहिलेको केपी ओलीको सरकार संविधानमा उल्लेख भएको संक्रमणकालीन अवस्थासम्म रहिरहनुपर्दथ्यो भन्ने हो तपाईँहरुको बुझाइ हो ? त्यो चाँही हामी भन्दा बाहिरको कुरा हो । यो प्रक्रियामै हामी सहभागी भएका छैनौं । त्यसैले यसमा हामीले यो वा त्यो भन्ने कुरा नै होइन । सारमा यी कोही पनि ठीक छैनन् । जनताको सरकार नआइकन केही पनि हुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । ओली सरकार रहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । ओली सरकार बस्नैपर्छ भन्ने पनि होइन र उनी आउनैपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन । देश र जनताको हिसाबले हेर्दा यो वा त्योमा केही फरक छैन । जनताको सरकार नआइकन कुनै पनि समस्या हल हुँदैनन् । तर ठ्याक्कै अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्दा ओली राष्ट्रबादी देखिने र एमाओवादी नेतृत्व राष्ट्रबिरोधी देखिने बडो बिचित्रको सिन देखिएको छ । यस्तो विचित्रको ‘सिन’ देखावटी मात्रै कि, साँच्चीकै होला त ? त्यो त भबिष्यले पुष्टि गर्ला । ओलीको हिजोको इतिहास हेर्दा त राष्ट्रवादी होइनन् भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ । तर अहिले परिस्थितिले उनलाई त्यस्तो बनायो । त्यस्तो बनाएन भन्ने कुरा पनि आएन । अब यतापटि हेर्दा, एमाओबादी नेतृत्वको साइज अब खस्कदै खस्कदै जाने होला भन्ने जस्तो स्थिति देखिन्छ । यी राजनीतिक परिघटनाकाबीच राज्य संयन्त्रमा तपाईँहरुको प्रवेश कसरी हुन्छ ? अब स्थानीय निकायको निर्बाचन भयो भने तपाईँहरु पनि निर्बाचनमा जाने स्थिति रहन्छ कि ? हाम्रो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हेर्दा संसदीय चुनावहरु आवश्यकता अनुसार उपयोग पनि गर्न सकिन्छ र बहिस्कार पनि गर्न सकिन्छ । उपयोग र बहिष्कारको कुराहरु त भइ नै हाल्छ । परिस्थितिको बिश्लेषण गरेर त्यो बेला के गर्न उपयुक्त हुन्छ, त्यो निर्णयमा पुग्छौं । उपयोग गर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ, बहिष्कार गर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ । तर प्रतिक्रियाबादी राज्यसत्ताको सरकारमा स्थायी रुपले पक्ष र प्रतिपक्ष भएर बस्ने र उपयोग गर्नेकोबीचमा गुणात्मक फरक छ । लेनिनले दुमाहामा पनि जारशाहीको उपयोग गरेका थिए । उपयोग आवश्यकता अनुसार हुन पनि सक्छ । तर उपयोग गर्ने कुरा र प्रतिक्रियाबादी राज्यसत्तामा गएर बस्नु भन्ने फरक कुरा हो । जनमत संग्रह, संविधानसभाजस्ता कुनै कुनै खासखासस्थितिमा उपयोग गर्ने कुरा हुन सक्छ । विशिष्ट अवस्थामा उपयोग गर्न नसकिएला भन्ने कुरा होइन । हामीले संविधानसभाको बेलामा हामीले उपयोग गर्यौं, त्यो अलग कुरा हो । तर संविधानसभाको चुनाव भइ संविधान बनिसकेपछि र पक्ष प्रतिपक्षको मान्यता बनिसकेपछि त्यो सरकारमा जाने भन्ने कुरा त नितान्त गलत कुरा हो । संविधान जारी नहुँदासम्म तपाईँहरुले सर्बपक्षीय सम्मेलन भनी राख्नु भएको थियो तर संविधान जारी भइ कार्यान्वयन पनि हुने अवस्थामा पुगिसकेपछि तपाईँहरु अब कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ त ? संविधान कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै अझै पनि निश्चित छैन । संविधान कार्यान्वयन हुने अवस्था पनि देखिएको छैन । तर संविधान कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले कोशिस गरिरहेका छन् । अब ठ्याक्कै कसरी कार्यान्वयन गर्ने र यी विभिन्न खेलाडीहरुले कहाँ लैजान खोजेका हुन भन्ने कुरा पनि थाहा छैन । कार्यान्वयन गर्नेहरुलाई नै केही थाहा छैन । ओलीले के कार्यान्वयन गर्न लागेका थिए, प्रचण्डजी गएपछि के कार्यान्वयन गर्ने हुन वा देउवाले कार्यान्वनय गर्ने के हो भन्ने स्वयं उनीहरुलाई थाहा छैन । यिनै नेताहरुले कयौंले संवैधानिक राजतन्त्र र कतिले हिन्दु धर्मका कुराहरु पनि गरिरहेका छन् । कसले के बनाउन खोजेको हुन त्यो थाहा छैन । दोस्रो, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा क्रान्तिकारी धारा केही कमजोर नै परेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कमजोर परेको र प्रभावकारी ढंगले आन्दोलनको तयारी गरेर अगाडि नबढ्दासम्म उनीरुले आफ्नो ढंगबाट केही न केही गर्छन । तर आन्दोलनको निम्ति बस्तुगत अवस्था राम्रो बन्दै गईरहेको महसुस हुन्छ । विश्वमै पनि र नेपालको सन्दर्भमा पनि आन्दोलनको बस्तुगत अवस्था राम्रो बन्दै गएको छ । यो संबिधानले बेग्लाबेग्लै पार्टीको सन्दर्भमा हमेसा गठबन्धनको बन्नुपर्ने, अनी सरकारको निमित्त झगडा गर्नुपर्ने, केही समय पार्टनर हुन्छ अनि फेरि त्यसलाई फालेर अर्को हुनुपर्ने देखिन्छ । यहाँ त बेग्लाबेग्लै पार्टी त के एउटै पार्टी भित्र पनि त्यस्ता खालको चलखेलको सम्भावना देखियो । ०४७ सालपछि बनेका पार्टीहरुमा एउटै पार्टीमा एउटाले अर्कोलाई फालेर प्रधानमन्त्री बनेको त देखियो । एउटै पार्टीमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुरको देखियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि त्यस्तै खालका विरोधाभाषहरु देखियो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सरोकारका सवाल त यिनले भन्ने मात्रै हुन् । सत्ताको निम्ति एकदम लुछाचुडी पर्छ । त्यसैले यहिँनेर आन्दोलन र क्रान्तिका बिजहरु छन् । त्यसकारणले ढुक्कसँग संविधान कार्यान्वयन गरेर संसदीय ब्यवस्था खाने अवस्था पनि देखिदैन । तर संसदीय ब्यवस्था त्यत्तिकै ढल्दैन । क्रान्तिकारीहरुले त्यसको निम्ति एउटा तयारी गर्नुपर्छ । त्यसैले क्रान्तिकारीहरुमा त्यो आवश्यकता एकदमै खड्किएर गएको छ । यो सत्ता र संसदीय ब्यवस्थामा त धाँजाधाँजा परिरहेकाछन । तपाईँले भनेजस्तै, संसदलाई उपयोग गर्ने कुरामा अहिले मधेसवादीहरुले उठाएको संबिधान पुनर्लेखन गर्नेतिर तपाईँहरु पनि जाने हो की ? हामी किन पुनर्लेखनतिर जाने ? हामी यो संबिधानलाई खारेज गरेर अर्को जनताको संबिधान बनाउनको निम्ति लाग्ने हो । संविधान पुनर्लेखनको एजेण्डा हाम्रो हुँदै होइन । यो बनाउने प्रक्रियामै हामीले जनगणतन्त्र नेपालको संबिधान बनाउनुपर्छ भनेर हामीले आफ्ना धारण सार्बजनिक गरिसकेका छौ । यी पुनर्लेखन गर्ने भन्ने कुराहरु सबै यहि सत्ता भित्रका कुरा हुन् । चाहे आन्दोलनमा रहेका ती मधेसीका कुरा गर्नुस्, चाहे सरकारमा आउने/जाने प्रतिपक्षमा बस्नेहरु हिजोदेखि नै सरकारमा रहिरहेका टिमहरु पुनर्लेखन वा जेजे गरे पनि आउने जाने मात्र हुन् । पुर्नलेखन गरेपनि जेजे गरेपनि गुणात्मक रुपमा म केही फरक देख्दिन । संविधान नै खारेज गरेर जनगणतन्त्र नेपालको संविधान लेख्ने गरी आन्दोलन उठाउन सक्ने क्रान्तिकारी पार्टीहरु पनि छैनन्, कसरी सम्भव छ र संविधान खारेज गर्न ? क्रान्तिकारी शक्तिहरु कमजोर रहेको कुरा साँचो हो । परिस्थितिले सबै कुराहरु बन्दै जान्छन् । अबको आवश्यकता नै जनगणतन्त्र नेपालको संविधान हो । अहिले नै संविधान फाल्न सक्छौं भन्न त म सक्दिन । तर हामी क्रान्तिको तयारीको दिशातिर जान्छौं । यो संसदीय व्यवस्थाले जनताको हित गर्नेवाला नै होइन । यसकाविरुद्ध वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था, संविधानकाविरुद्ध संघर्ष गर्ने आधार छन्, बिजहरु छन् । एउटा द्वन्द्वको समाधान नहुँदै अर्को द्वन्द्वको बिजहरु रोपियो भनेर भनेको मैले एक पटक भनेको थिएँ । द्वन्द्वका बिजहरु छन्, तयारी गर्नुपर्छ, लामो तयारी गर्दै गएपछि यसलाई पल्टाउन सकिन्छ । क्रान्तिको तयारीका निम्ति एकतामा नगएको अर्को माओवादीसँग पनि एकता गरेर अघि बढ्ने अवस्था रहन्छ कि ? हामीले अहिले नै विप्लजीसँग एकता गर्ने सोचेका छैनौं । एकता वा ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा जानै हुँदैन भन्ने त होइन तर विचार, सिद्धान्त नमिलिकन जवर्जस्ती एकताको कुरा गर्नु हुँदैन भन्नेमा छौं । एकताको बहसले हामीले धेरै हन्डर खाइयो । एमाओवादीसँगको एकताको कुराले हामीले धेरै धोका पाएका छौं । एकता हुँदैन, एकता गर्नै हुँदैन भन्ने होइन । क्रान्तिकारीलाई एक ठाउँमा जोड्न त पर्छ । एकता वा ध्रुवीकरण होला तर त्यसको लागि पनि समय चाहिन्छ । क्रान्तिकारीहरुलाई सिध्याएर संसदवादमा लगेर हुलेर एकता गर्ने हो कि अवसरवादीहरुको भ्रममा परेका साथीहरुलाई एउटा नयाँ ढंगले क्रान्तिको प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो । तपाईँले नै भनेजस्तो नेपालदेखि विश्वकै परिस्थिति क्रान्तितर्फ अगाडि बढिराखेको छ भने त क्रान्तिकारी समूह एकतामा जानुपर्ने होइन ? क्रान्तिकारीहरु एकतामा जाने हो । हामीले देखियो, भोगियो जवर्जस्ती एकता भन्ने हुँदैन । एकताका लागि विचार मिल्नुपर्छ । छलफल बहस गरेर विचार मिलाएर मात्रै एकता ठीक हुन्छ । एकता गर्नैपर्छ वा गर्न हुन्न भन्ने कुरा होइनन् । विचार मिलेर भएको एकता ठीक छ अन्यथा विचार नमिलिकन जवर्जस्ती भावनाले मात्रै एकता हुँदैन । विगतमा एकताको कुरा गर्दा हामीले गल्ती नै गरियो भन्ने महशुस गरेका छौं । बेकारमा त्यस्तो खालका साथीहरु रहेछन् । त्यस्तो गर्ने साथीहरुसँग के एकता गर्ने हो ? यस्तो गर्ने खालका साथिहरु रहेछन् भन्ने त देखिहालियो नि स्थिति कता जाँदैछ भन्ने । त्यसैले एकता भएन, ठीक भयो, राम्रो भयो । तपाईँलार्इ वैद्य एक्लै हिँड्याे भन्ने आरोप पनि त छ । कहिलेसम्म एक्लै हिड्ने ? एक्लै हिँडेको भनेर आरोप लगाउने त लगाउँछन् । उनीहरुको त आरोप लगाउने नै काम हो । तर म एक्लै होइन । हाम्रो राम्रो टिम छ । साथीहरु छन्, जनता छन्, एजेण्डा छन् । मैदान खाली छ, विस्तारै हामी फेरि ठीक ठाउँमा आउँछौं । विगतमा पनि त्यही हो, हामीलाई एक्लै भन्थे, हैरान हैरान पार्थे । पञ्चायती ब्यवस्था ढलेर बहुदलीय ब्यवस्था आउने बेलामा हामीलाई यति हैरान पार्थे । त्योबेला हामीले साम्राज्यवादी बहुदलीय ब्यवस्था आयो भनेर हामीले भन्यौं । हाम्रै साथीहरु रिसाउँथे । तर सधैंभरी यो टिक्नेवाला हुँदैन । दुई विशाल देशको बीचमा पर्ने हाम्रो मुलुक दक्षिण एशियाको सानो भूगोलमा रहेर जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्छौ भन्ने कुरा अलि असम्भव होइन र ? हाम्रो भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको हुनाले यहाँको जिओपोलिटिक्स समस्याहरु इत्यादि कुराहरु त छन् । तर क्रान्ति भूगोल र देशविशेषमा मात्रै होइन । हामी त सर्वहारावादी हौं । नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति विश्वमा पनि क्रान्तिको वातावरण बन्नुपर्छ । हामी यहाँ मात्रै छैनौं । भारतीय शासक वर्गकाविरुद्ध पनि संघर्ष भइरहेको छ । क्रान्तिकारीहरु भारतमा पनि छन्, ती हाम्रै हुन् । अन्तका क्रान्तिकारी पनि हाम्रै हुन् । अहिलेको लडाइँ भूमण्डलीकरण भनिएको छ, साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण भइराखेको भनिन्छ । तर अब सर्वहारावादीहरुको भूमण्डलीकरण हुन जरुरी छ । हाम्रो अभियान त्याहाँ हो । हाम्रो यहाँ राष्ट्रियता खान खोजियो भने हामी अन्तर्राष्ट्रियवादबाट पनि पनि जित्छौं । हामी विश्वका सर्वहारावादी मिल्छौं । सर्वहारावादी नमिलेर सुखै छैन, मिल्नुपछ । अहिले सर्वहारावादी कमजोर छ । तर साम्राज्यवादीहरुले सर्वहारावर्गलाई सधैं कमजोर बनाउन सक्दैन । साम्राज्यवादीहरुले आफ्नो चिहान आफै खनिरहेका छन् । वित्तीय पूँजीको बाटोमा उनीहरु कसरी हिड्न सक्छन् ? उनीहरु वित्तीय पूँजीको बाटो पार गर्नै सक्दैनन् । उनीहरुकाबीच संकटै संकट छ । त्यसैले अब विश्वकै क्रान्तिकारीहरु मिलेर क्रान्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । साम्राज्यवादीहरुको भूमण्डलीकरण मात्र होइन, अब सर्वहारावर्गको पनि भूमण्डलीकरण हुन्छ । त्यसकारण हामी विश्वकै सर्वहारावादी मिलेर लड्छौं । नेपालका, भारतका तथा अन्तका सबै जनता मिलेर आ–आफ्ना देशका शासकलाई पनि फाल्ने, विश्वमा पनि फाल्ने नयाँ ढंगको क्रान्ति हुन्छ । तपाईँहरु आफै त मिल्न सक्नु भएको छैन, विश्वकै सर्वहारावादी मिल्छन् भन्ने कुरा त अपत्यारिलो भएन र ? पार्टीभित्र अवसरवादी भएपछि त कसरी मिल्ने त ? जनताहरु नमिलेका होइनन्, पार्टी भित्रका अवसरवादीहरुका कारण समस्या भएको हो । नेताहरुलाई चिन्न गाह्रो हुँदोरहेछ । तपाईँले उठाएको कुरा ठीक हो । हामी पनि भ्रमित भयौं । त्यसैले निरन्तर गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्दै जानुुपर्ने थियो । हामीबीचमा विवाद र बहसहरु थिए । हामीले पनि ऐन मौकामा जनताको लागि लड्न पर्ने थियो । फेरि अर्को कुरा, क्रान्ति भन्ने खालको कुरा हेर्नुस ठूलो स्मार्ट भएपछि क्रान्ति हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । पार्टी बनाउनु प¥यो भनेर ठूलो संख्या काम लाग्ने वाला होइन । गुणमा हो, जनसमर्थन हुनुपर्छ । जनताकोबीचमा जानुपर्छ । जनता उत्पीडित छ । अहिले विभिन्न कारणले काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र तथा बाबुरामसँग जतिपनि मान्छेहरु छन्, ती राम्रा पनि त छन् । ती ऐन मौकामा क्रान्तिमा समाहित हुन्छन् । जनयुद्ध शुरु गर्नेबेलामा हामीसँग कोही पनि थिएनन् तर ह्वात्तै जनताहरु आए । नेपाली जनताहरु त्यस्तो ‘रिजिट’ छैनन् । प्रगति, मुक्ति, देशभक्ति, क्रान्ति भनेपछि जनताहरु आइहाल्छन् । त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ । अहिले अप्ठ्यारो छ हामीलाई, विचारको बिउ जोगाउनुपर्छ । क्रान्तिको झण्डा गिर्न दिनु हुँदैन । माओत्सेतुङले भनेजस्तो एउटा सानो चिङ्गारीले पूरै जंगल डडेलो लगाउन सक्छ । हामी अहिले चिङगारी भएर बाँच्नुपर्छ । पूँजीवाद झनै समृद्ध हुने पूँजीवादले निरन्तर आक्रमण गरिराख्ने अनि तपाईँहरु क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु चाँही एउटा कुनामा बसेर फुट्दै जाने अवस्था छ । विचारको सही प्रयोग हुन नसकेको जस्तो लाग्दैन ? तपाईँले भनेको कुरा जायज हो । अव यहाँ युगको कुरा प¥यो । हामी तत्काल नतिजा खोज्छौं । परिणाम दुई तीन दिनमा खोज्छौं । क्रान्ति भनेको सयौं वर्षको कुरा आउँछ । सामन्तवाद कति सय वर्ष भयो । यही पूँजीवाद पनि ५/६ सय वर्ष भयो होला । अझै नेपालमा राम्रोसँग पूँजीवाद आउन सकेको छैन । युगको आयू अलि लामो हुन्छ, मान्छेको आयू अलि छोटो हुने यो समस्या छ ।
हामीले त्यही थोत्रा राइफल लिएर लड्नुपर्छ भन्ने छ ? हामीले न्यूक्लीयर हतियारहरु, अरु नयाँ नयाँ आधुनिक हतियारहरुबाट लड्न सक्दैनौं ? एकठाउँमा क्लिक गरेर साम्राज्यवादीहरुले ध्वस्त पार्न सक्छन् भने हामीले पनि त सक्छौं नि एक ठाउँमा बसेर ।
अन्ततः यसले धान्दैन । उत्पादन प्रणाली नीजिमा छ, वितरण प्रणाली पनि त्यहीअनुसार लैजानुपर्यो । मान्छेले विज्ञान र प्रविधिको असाध्यै विकास भयो भन्छन् । त्यो राम्रो हो तर विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग साम्राज्यवादले गरेको छ । सर्वहारावर्गले त्यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने भयो । अहिले राम्रो भएको छ, विश्वका मान्छेहरु धेरै पढेलेखेका छन् । अवको क्रान्ति हिजोको जस्तै तरिकाले हुँदैन । अबका वार त साइवर वार हुन्छ । साइवर वार नगर्नु भन्ने छ ? हामीले त्यही थोत्रा राइफल लिएर लड्नुपर्छ भन्ने छ ? हामीले न्यूक्लीयर हतियारहरु, अरु नयाँ नयाँ आधुनिक हतियारहरुबाट लड्न सक्दैनौं ? एकठाउँमा क्लिक गरेर साम्राज्यवादीहरुले ध्वस्त पार्न सक्छन् भने हामीले पनि त सक्छौं नि एक ठाउँमा बसेर । छापामार युद्धका नयाँ टेक्निक र नयाँ तरिकाहरु आए । प्रविधिका विकासले फाइदा नै भएको छ । अव पछाडि फर्कने होइन, अगाडि बढ्नुपर्छ । अचाक्ली टिक्दैन । कृषि प्रधान भनेर आएको देशमा अरु केही नभएपनि जडिबुट्टी, बनजंगल, जमीनका कुराहरु आउला । यसलाई फलाउने फुलाउने इत्यादि गर्ने भन्दा यहाँ केही पनि गर्न नदिने, श्रम पनि लैजाने, अनुदान पनि नदिने, पूँजी पनि लैजाने अनि उनीहरुको नवउदारवादी शर्त मानेर हामीले ऋण खाएर आउनुपर्ने ? यो स्थिति सधैं टिक्दैन । अहिले ग्रीसको उदाहरण हेरौं, ग्रीस पूँजीबादी क्रान्तिबाट समृद्ध भएको देश हो । त्यहाँ भित्र पनि यस्तो स्थिति आइहाल्यो । जहाँसुकै त्यस्तै स्थिति छ । यो अन्तरविरोधको हल गर्ने तरिका अव अलि नयाँ हुन्छ । लडाईं भयो भने पनि अलि नयाँ तरिकाको लडाईं हुन्छ । त्यसकारणले पनि विचार बढाउनु पर्ने हुन्छ । यिनै मुलुकहरु भित्र पनि कन्ट्राडिक्सन छन्, उनीहरु पनि सकिरहेका छैनन् । त्यसकारणले यो अन्तरविरोधलाई ठिक ढंगले पहिचान गर्न सक्यौं र त्यो अनुसार पार्टी सोलिड हुनुपर्छ छ । सोलिड र क्रान्तिकारी हुन सकियो भने क्रान्ति पूरा हुन्छ । समय लाग्छ तर भविष्य उज्वल छ ।